किन पटक-पटक दूध उमाल्न्नु हुँदैन? यस्तो छ, रहस्य – Etajakhabar
किन पटक-पटक दूध उमाल्न्नु हुँदैन? यस्तो छ, रहस्य
ताजा खबर :-आजसम्म हामीले सुन्दै र प्रयोग गर्दै आएका छौँ कि दूधलाई राम्रो सँग उमालेर पिउनु पर्दछ । किनकि यसमा रहेको सुक्ष्म जीवाणु नष्ट हुन्छ र दूधलाई उमालेर पिउनु ठिक पनि हो । यसकारण अधिकांश मानिसले दूधलाई उमालेर मात्र पिउने गर्दछन् तरपनि दूधलाई पटक-पटक उमाल्नु हानिकारण सावित हुनसक्छ ।
दूधबाट पोषण प्राप्त गर्नका लागि तपाई दूध उमालेर पिउनुहुन्छ होला तर हालै गरिएको एक सोधमा यो कुरा पत्ता लागेको छ कि पटक-पटक दूध उमाल्दा पोषक तत्व नष्ट हुनसक्छ । यसो गर्दा दूधबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण पोषक तत्व प्राप्त हुँदैन ।
पोषणको यस नोक्सानबाट बँच्नका लागि दूधलाई पटक-पटक उमाल्नु हुँदैन । यसको साथै मुख्य कुरा ध्यान राख्नुपर्ने यो छ, कि दूधलाई दुई-तीन मिनेट भन्दा अधिक समय सम्म उमाल्नुहुँदैन ।
यस रिसर्चको अनुसार, १७ प्रतिशत महिलालाई यो कुरा नै थाहा हुँदैन कि पटक-पटक दूध उमाल्दा यसको पोषक तत्व नष्ट हुन्छ । त्यही ५९ प्रतिशत महिलालाई लाग्छ कि दूध पटकपटक उमाल्दा पोषक तत्वमा वृद्धि हुन्छ र २४ प्रतिशत महिलालाई सोच्ने गर्दछन् कि दूधलाई उमाल्दा कुनै फरक पर्दैन ।
यसकारण अब दूधलाई एकैपटक उमाल्नुहोस् र आफ्नो बच्चालाई यसको पुरा पोषण प्राप्त गर्न दिनुहोस् । तपाईको थोरै समझदारी बच्चाको जीवनभरीको लागि फाइदाजनक सावित हुन्छ र स्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधार आउँछ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष २७, २०७४ समय: २२:३८:२१